Asa fanitarana ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD-Fitsangatsanganana tany Jiulongtan Tamin'ny 31 Oktobra 2019, tamin'ity vanim-potoana fararano volamena ity, ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD dia nandamina mpiasa hanatanteraka hetsika fiakarana tendrombohitra sy fampandrosoana any amin'ny Jiulongtan Scenic Area ...
Ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD dia nandray anjara tamin'ny foara ara-toekarena sy varotra iraisam-pirenena any amin'ny faritanin'i Hebei.
Ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD dia nandray anjara tamin'ny foara ara-toekarena sy varotra iraisam-pirenena any amin'ny faritanin'i Hebei. Miaraka amin'ny lohahevitra hoe "Fiaraha-miasa eo an-toerana ny firenena sinoa-afovoany sy atsinanana eropeana, ny vintana vaovao, ny saha vaovao, ny habakabaka vaovao", ny afovoany sinoa-afovoany ...
Mpiasa miavaka Celebarate ny alin'ny Taom-baovao ao Sanya
Mpiasa miavaka Celebarate Taom-baovao any Sanya Eo ambanin'ny fandaminana malina sy feno ataon'ny orinasa, ny 28 desambra lasa teo, ny SJZ CHEM-PHARM CO.. .
Konferansa momba ny fandraharahana Shijiazhuang sy Hongria
Konferansa momba ny fandraharahana Shijiazhuang sy Hongria Tamin'ny faha-20 Novambra, fihaonamben'ny orinasa Shijiazhuang Hongria natao tao amin'ny efitrano fihaonambe Hotel Pacific Asia. Tian Jiayi, talen'ny birao varotra monisipaly Shijiazhuang ary mpitarika ny orinasa ...